I-Android 2.0.1 inengxaki yokhuseleko | I-Androidsis
antocara | | Motorola, Izaziso, Khu seleko, Iinguqulelo ze-Android
Ingxaki yokhuseleko ifumaneka Android 2.0.1 Inguqulelo enazo zonke iiterminal ezifakiweyo Motorola Droid eMelika Njengoko kuxeliwe techcrunch, inkqubo yokutshixa ipateni ekhoyo ukuze isebenze kwi Inkqubo ye-Android ulwaphulo lokhuseleko, le nkqubo emiselweyo ayisebenzi. Ngale nkqubo yenziwe yasebenza, kuyimfuneko ukwenza iphethini echaziweyo ngaphambili ngalo lonke ixesha sifuna ukuvula i-terminal. Ukuba usebenzisa esi sitshixo sokugcina kwaye umnxeba ufunyanwa ngokucofa iqhosha eliBuyayo okanye eliBuyayo, alivulwanga kwaye unolawulo olupheleleyo kwifowuni. Ngale ndlela unokufikelela kuyo yonke idatha ekhoyo kwifowuni, iiakhawunti ze-imeyile, ikhalenda, abafowunelwa nayo yonke into esinayo kuyo.
Isithethi sikaGoogle sibuze malunga nale nyani siphendule ukuba bayayazi ingxaki kwaye banethemba lokuyisombulula kungekudala.
Kubonakala ngathi yenzeka kuphela kuhlobo lwe-Android 2.0.1 ke "ngethamsanqa" ingxaki ayixhaphakanga kakhulu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Motorola » I-Android 2.0.1 inengxaki yokhuseleko
Iza kuvela nini inyani ngokusemthethweni eSpain?
Ndiyathemba ukuyilungisa kungekudala…
Nangona kunjalo, andidinwa kuthiwa sifuna i-2.x kwiHero ngoku!
Jeez, ezi zisuka kwi-HTC zithathe iqanda!
Ewe, ukuza kuthi ga ngoku kule nto uyibonayo ingxaki ayinzima kodwa ngubani owaziyo ukuba ndigqibele ukuva malunga nengxaki ngee-smartphones malunga ne-Black Berry, abasebenzisi abanakho ukufikelela kunxibelelwano lwasentlalweni kunye nezinto ezinje, iyasasazeka kungekudala, kodwa masingabi ukukwazi ukufikelela kuyo yinto enye, kodwa loo datha inokubiwa okanye enye into elolo hlobo ndiyithatha njengembi kakhulu. Ngapha koko, yiyo loo nto ndikhetha iWindows Phone, inyani ndiyayithanda le OS ngakumbi, ngakumbi ukukwazi kwayo ukuhlela amaxwebhu
Ewe, jonga kubasebenzisi be-SAMSUNG GALAXY, impikiswano esinayo ukuba ayisiyiyoyomanyano lwee-geek zalomhlaba asinakuba nayo i-eclair 1.2 (Android 2.0) kwi-i7500 ..
Isamsung, yinkampani ebashiyileyo abo babaphathise ikamva labo xa bethenga imodeli yabo yomnyele ... kulihlazo.
Ngaba ungandinceda xa uvula iphethini yefowuni ye-HTC MYTOUCH 3G SLIDE, kukuba ndichaze ipateni "X" emva koko ndenza iinzame ezininzi kwaye iselfowuni yam ivaliwe ... Ngaba umntu angandinceda?
07 / 05 / 2011 kwi-9: 41 ntambama
Ndilibale ipatheni yokuvula iscreen se-Huawei UM840, kwaye andikwazi ukusebenzisa iselfowuni kwaphela, ivaliwe ngokupheleleyo, andikwazi ukufikelela kwinto. Ndingayilungisa njani le nto? Ungandinceda ngale nto nceda !!! Enkosi, kwaye uThixo akusikelele
Ndine LG optimus eyodwa kwaye iqabane lam livimbile ipateni, ke icela iakhawunti yam kaGoogle kwaye ndiyifaka, ayenzi nto… .Ndinokwenza ntoni?
Ndine-Android 2.2 umnqamlezo wecwecwe kwaye andikhumbuli ikhawuntari yomqeshi wam, umntu unokundinceda, kuyangxamiseka kwaye ndiyayisebenzisa namhlanje